सन्दर्भ : अनित थापाको दोहोरो नागरिकता : काठमाडौंखबरका सम्पादकले भने- ‘सार्वजनिक जीवनमा विवाद सामान्य’ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारसन्दर्भ : अनित थापाको दोहोरो नागरिकता : काठमाडौंखबरका सम्पादकले भने- ‘सार्वजनिक जीवनमा विवाद सामान्य’
January 29, 2021 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मुख्य समाचार 0
तपाईं सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने विवाद हुने, विवादले छुने सामान्य कुरो हो। त्यसलाई चिर्दै जाने हो। म यत्ति भन्छु, हाम्रो श्रोतले पाएको जानकारी एवंम प्रमाणका आधार समाचारयोग्य थियो। सम्भवतः अनितज्यूलाई एउटा पाठ पनि हो यो। यो यात्रामा के र कस्तासम्म विषयले आफुलाई छुनसक्छ भनेर ।
जिटिए अध्यक्ष अनित थापालाई भर्खरै ‘दोहोरो नागरिकता’-रहेको भनिएको एउटा ‘आधारहिन’ समाचारको बलमा ‘ट्रोल’ गरिएको थियो। नेपालको एउटा पोर्टलले समाचार त्यसरी छापेको थियो, जसको आशय बन्थ्यो, ‘दोहोरो नागरिकता बोकेको मानिस जिटिएको पदमा बस्न मिल्दैन।’
सूत्रले कुनै पनि समाचार दिन्छ भने, सम्पादक, पत्रकार वा मिडिया हाउसले त्यसबारे ‘क्रसचेक’ गर्नुपर्ने हुन्छ। सूत्रको नाममा कुनै पनि पत्रकारलाई कसैमाथि मानसिक अत्याचार गर्ने छुट छैन। यदि ‘क्रसचेक’ गर्दा सूत्रको खबर विश्वसनीय देखियो भने, मुद्दालाई प्रभावशाली र परिणामपरस्त बनाउने ‘रणनीतिक टेक्निक’ अप्नाइन्छ।
हाउसको रणनीति हुन्छ, आरोपीबारेका खबर सूत्रको बलमा सम्प्रेषण गर्ने र प्रकाशमा आइसकेपछि त्यसको जे प्रतिक्रिया आउँछ, त्यसलाई पुष्टि गर्न ‘क्रसचेक’-बाट पाएको तथ्य राख्दै फलोअप गर्ने।
सूत्रको खबरमा बल छ भने त्यसरी उठाइएको मुद्दाले बहस निम्त्याउँछ। बहसले समाचारले दाबी गरेको ‘आरोप’-लाई प्रमाणित गर्ने आधार निर्माण गर्छ। प्रमाणित गर्न निकायमाथि छानबिन गर्ने दवाब बन्छ, त्यसपछि छानबिनले सत्यतथ्य बाहिर निकाल्छ।
यदि कसैले अनित थापालाई साँच्चै अपराधी देख्छन् भने उसित पर्याप्त प्रमाण हुनपर्छ। शङ्काको भरमा तथ्यहिन आरोप लगाउनु मानमर्दन गर्ने अभ्यासबाहेक केही होइन।
उक्त समाचार आएपछि विमल खेमा मोर्चाबाहेक कसैलाई सक्रिय र आक्रमक देखिएन। विमल खेमाको नियत साफसाफ देखियो, यसै समाचारको बलमा अनित थापालाई जिटिएको चौकी छोड्न दवाब बनाउनु। विमल खेमाले दार्जिलिङमा जिटिए छोड्ने आग्रह गर्दै पोस्टर टाँसेपछि अनित थापाको विज्ञप्ती आयो।
विज्ञप्ति आएपछि पनि सोसल मिडियामा ट्रोल बनाइयो, अनित थापाले ‘विदेश गएको कागजपत्र सार्वजनिक गर, लन्ठै साफ हुन्छ।’ यो ट्रोल पनि विमल खेमाबाट नै आयो। यति संवेदनशील मुद्दाको समाधान अनित थापाले आफू विदेश गएको कागजपत्र सोसल मिडियामा सार्वजनिक गर्दा हुन्छ भनेर बुझ्ने यो मानसिकताको पछिल्तिर के छ?
सत्ताको लडाईँ र दलीय इगो।
यद्यपि, अनित थापालाई लगाएको आरोप सत्ताको लडाईँ र दलीय इगोभन्दा कता हो कता संवेदनशील हो। खबरम्यागजिनले यसबारे अनित थापालाई सम्पर्क गऱ्यो।
‘यो सत्तालोलुपहरूको प्रोपोगान्डा मात्र थियो,’ उनले भने।
नेपालले यस्तो समाचार छाप्नुको अर्थ हो, अनित थापाबारे नेपालको चासो। यदि नेपाललाई अनित थापाले गल्ती गरेको लागेको छ भने यसबारे कारवाही वा जाँचको लागि पनि नेपाल नै अग्रसर हुनुपर्छ। आरोप नेपालकै पोर्टलले लगाएको छ, प्रमाणित गर्ने, दण्डित गर्ने पनि नेपालकै पोर्टलले गर्नु पऱ्यो। तर समाचार छापिने वित्तिकै जसरी विमल खेमाले सक्रियता र आक्रमकता देखायो, त्यसको आसय बुझेरै अनित थापाले विज्ञप्ती जारी गरेको बुझिन्छ।
केहीदिनपछि फेरि नेपाल कै एउटा पोर्टलले त्यही विषयमा समाचार सम्प्रेषण गऱ्यो। त्यसले जुन ठाउँबाट अनित थापाले नागरिकता बनाएको आरोप लगाइएको थियो, त्यो सरासर झुटो रहेको लेख्यो। सम्बन्धित कार्यालय र अधिकारीसमेतले अनित थापा नामको कुनै नागरिकता नबनिएको र सोसल मिडियामा ‘भाइरल’ भनेको नागरिकता पत्र तत्कालीन नागरिकता पत्रसित मेल नखाने पनि प्रष्ट गरिएको थियो।
त्यसयता यो प्रोपोगान्डा बिलाएर गएको छ।
काठमाडौं खबरका सम्पादक, केशव पाठकलाई खबरम्यागजिनले केही प्रश्नहरू गरेको थियो। खबरम्यागजिनले त्यस समाचारले भारतका गोर्खाको पहिचानको सवालमा बोक्ने संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर प्रश्न गरेको थियो, ताकी भारत र नेपालका नेपाली भाषी नागरिकबीच जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई खलल पुऱ्याउने अभ्यास अघि नबढोस्। जुन आरोप छ, कुनै सत्तालोलुप ( अनित थापाको भाषामा) शक्तिले चालेको प्रोपोगान्डाले भारतका गोर्खाहरूमाथि लाग्ने विदेशीको लाञ्छनाको आगोमा नेपालले घ्यु नथपोस् भन्ने आशयले खबरम्यागजिनले निम्नलिखित प्रश्न गरेको थियो-
‘नेपालको सरकारी कागजातको दुरुपयोग गरी बेपत्ता भएका व्यक्ति अहिले भारतीय सत्ता राजनीतिमा हावी हुन लागेका छन्,’ तपाईँले समाचारमा लेख्नु भएको छ। कानूनी प्रक्रिया नभइ, जाँचबुझ नभइ, न्यायिक भर्डिक्ट नआइ, तपाईँले किटान गरेर फैसला नै सुनाएर यसो लेख्नुको अर्थ के हो?
अनित थापाले दुरुपयोग गरेको हो होइन अथवा तपाईँले जारी गर्नु भएको जुन कागज, छ त्यो सही हो होइन छानबिन भइसकेर थापा दोषी भइसकेको हो? जिम्मेवार पत्रकारले निर्णय नै सुनाउने र पाठकलाई भ्रममा पार्ने गरी यसरी समाचार सम्प्रेषण गर्न मिल्छ?
‘नेपाली नागरिककै हैसियतमा वि.सं. २०५१ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई) बसेका व्यक्ति हुन् अनित थापा’- भनेर लेख्नु भएको छ, यहाँलाई यसको सबै प्रमाण सार्वजनिक गर्ने अनुरोध गर्छु। थापा दुबई बसेका सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनुहोला।
‘उनी आउँदो अप्रिल महिनामा भारतमा हुने विधानसभाको निर्वाचनमा पंश्चिम बंगाल प्रान्तको खर्साङ जिल्लाबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन्,’ अहिलेसम्म उम्मेदवारबारे र तयारीबारे हामीले कतैबाट केही सङ्केत पाएका छैनौं, तपाईँले खरसाङबाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेको खुलाउनु भयो, यसको आधार र स्रोतबारे जानकारी दिनुहोला।
‘नेपालको अध्यागमनमा कम्प्युटर प्रणालीको विकास नभएको समयको फाइदा उठाउँदै आफ्ना सम्पूर्ण अभिलेखहरु नामेट पार्न सफल भएका अनितको,’ थापाले सम्पूर्ण अभिलेख नामेट पारेको प्रमाण पेश गर्नुहोला, कसरी थाहा पाउनु भयो नामेट पारेको? तपाईँको खोजी अनुसन्धानबारे पुख्ता प्रमाण दिनुहोला।
नागरिकताको फोटोकपी प्रदान गर्ने विश्वस्त स्रोत भारतीय हुन् कि नेपाली हुन् जनाइदिनुहोला।
काठमाडौंखबरले भारतीय गोर्खाको पहिचानको सवालमा भारतीय मूलधारको दृष्टिकोणलाई पश्रय दिएर, भारतीय गोर्खाले जुन भारतबाटै विदेशीको लाञ्छना लगाउनेगर्छ, त्यसलाई कुन आधारमा घ्यु थपिरहेको हो? के यो नेपालले भारतीय गोर्खाहरूप्रति गरिरहेको कुनै षडयन्त्र हो?
तपाईँको समाचारको भाषा त पुष्टिलाई हेर्दा तपाईँको सूत्र भारतीय रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ, के काठमाडौं खबरले यो मुद्दाको संवेदनशीलता थाहा पाएरै यो समाचार प्रकाशमा ल्याएको हो?
पवन चामलिङ, मणिकुमार सुब्बापछि अनित थापामाथि यस्तो आरोप लागेको छ, के नेपालले यसपल्ट भारतीय गोर्खामाथि कुनै षडयन्त्र गरिरहेको हो?
यी प्रश्नहरूको उत्तर त सम्पादक पाठकले दिएनन्। तर उनले आफूहरूको समाचारले अनित थापालाई ‘पाठ’ दिएको र भारतीय नेता वा नागरिकले नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीजस्तो प्रश्न गर्नै नहुने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्ने सुझाव पनि दिए। उनले सार्वजनिक जीवनमा विवाद भन्ने कुरा सामान्य हुने पनि जनाएका छन्।
उनको उत्तर यस्तो छ-
हामीले हाम्रो श्रोत र प्राप्त प्रमाणका आधारमा समाचार बनाएका थियौं । फेरि अनितज्यूले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु भयो। हामीले ससम्मान समयमैं प्रकाशित गऱ्यौं । सम्भवतः समाचारजन्य विषयको शुरूवात यसरी नै हुन्छ। अगाडि के कसो हुन्छ हामी फलोअप गरिरहेका छौं। एकदुई दिनमा प्रकाशित हुनेछ। हरेक कुराको समस्यासँगै समाधान हुन्छ। अनितज्युको नागरिताको विषयमा यो क़ुरा उठ्यो उहाँले प्रष्ट्याउनु भयो, पहिलो चरणको कुरो सक्किएको छ।
तपाईं सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ भने विवाद हुने, विवादले छुने सामान्य कुरो हो। त्यसलाई चिर्दै जाने हो। हाम्रा केपी ओलीज्यूलाई जस्तो प्रश्न उठान नै हुन नहुने, म प्रश्न र विवाद भन्दा माथि छु मलाई सम्मान नै गरिरहन पर्छ, नत्र तिमीहरू नर्कमा जान्छौ भन्ने खालको मानसिकता एवं भ्रम छ वा हो भने म यो तपाईंहरुले पनि त्याग्नुपर्छ । म यत्ति भन्छु, हाम्रो श्रोतले पाएको जानकारी एवंम प्रमाणका आधार समाचारयोग्य थियो। सम्भवतः अनितज्यूलाई एउटा पाठ पनि हो यो। यो यात्रामा के र कस्तासम्म विषयले आफुलाई छुनसक्छ भनेर ।
पाठकको पोर्टलमा समाचार आएको केही मिनटमा नै विमल गुरुङ खेमाले त्यसलाई व्यापक भाइरल गरेको थियो। त्यति मात्र होइन समाचार आएको चारघन्टामा दार्जिलिङमा पोष्टरै टाँसिएको थियो। भोलिपल्ट त प्रिन्टेड पोष्टरै पनि देखापऱ्यो।
पोर्टलले साँच्चै नै बलियो र भरपर्दो सूत्रबाट सक्कली नागरिकतापत्र दिएर समाचार बनाएको थियो भने त्यो निक्कै संवेदनशील मुद्दा थियो। तर पोर्टलको समाचारबारे अनित थापाले जुन प्रतिक्रिया दिए, त्यसले त्यो केवल प्रोपोगान्डा मात्र रहेको साबित गरेको छ। पोर्टलको सम्पादकले पनि थापालाई एउटा पाठ दिएको बताएर ‘यस्तो मुद्दा पनि उठ्न सक्छ भनेर होसियारी गराएको’ आशय पोखे। यदि त्यो आरोप साँच्चै संवेदनशील थियो भने यतिखेर भारत र नेपालका दुवै सरकारले जाँचपड्ताल गरिसक्थ्यो। न त सरकारहरूले त्यसबारे जाँचबुझ नै गऱ्यो न त आजको मितिसम्म उक्त पोर्टलले ‘फलोअप’ समाचार नै छाप्यो।
यदि मुद्दा संवेदनशील हुनु हो भने विमल खेमालगायत सबै राजनैतिक दलले यसबारे चासो राख्नुपर्ने हो र थापाले दोहोरो नागरिकता राखेकोबारे नेपाल र भारत दुवै सरकारलाई जाँच गर्न आग्रह गर्नुपर्ने हो। तर यस्तो आग्रह पनि कतै देखिएन। यस मुद्दामा केवल विमल खेमालाई मात्र सक्रिय र आक्रमक देखिएकोले पनि प्रोपोगान्डा किन र केको लागि भन्ने स्पष्ट भयो।
यदि साँच्चै विमल खेमालाई त्यत्तिकै आपत्ति र सरोकार हुनु हो भने यस्तो संवेदनशील मुद्दाबारे सरकारहरूलाई जाँच गर्ने आग्रह गर्थ्यो। विमल खेमाले आग्रह त गऱ्यो, तर पोष्टरमा।
त्यो आग्रह थियो, ‘अनित थापा जिटिएको चौकी छोड।’
जिटिएको चौकीको निम्ति यति संवेदनशील मुद्दामा प्रोपोगान्डा? यो भने सोच्नुपर्ने विषय बनेको छ।